न छोराको मु’ख हेर्न पाए, न अन्तिम सं’स्कार गर्न पाए ! – Khabarhouse
न छोराको मु’ख हेर्न पाए, न अन्तिम सं’स्कार गर्न पाए !
Khabar house | २४ चैत्र २०७६, सोमबार ०४:५७ | Comments
हेमन्त काफ्ले,सिड्नी : अस्ट्रेलियाको स्टार्टस्फिल्ड स्टेसनको रेलमा मृ’त भेटिएका मिलन गुरुङको श;व सिड्नीस्थित एक श’वगृहमा राखेको दुई हप्ता बिति सक्यो । दुई नेपाली समूहबीचको वि’वादपछि भएको झ’डपमा ज्या’न गु’माएका अमित कार्कीको श;व पनि शवगृहमा छ। यी दुई श;व नेपाल लैजान बाधक बन्यो-लकडाउन।
हालै नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज चार्टर्ड गरेर अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन आए पनि खाली फर्किएको उक्त विमानमा श;व लैजाने वातावरण बनेन। परदेशमा बिनाकारण ज्यान गु’माएका दुई युवाको परिवार यतिखेर शोकमा छन्। को;रोनाको कहरले मृ’तक छोराको अनुहार समेत हेर्न पाएका छैनन् परिवारले। लामो समय शव राख्दा समस्या थपिने भएपछि गोरखा घर भएका मिलनको श;व सोमबार यतै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ।
उनको परिवारको अनुमति अनुरूप सोमबार दाहसंस्कार गरिने एन आरएन अस्ट्रेलियाका प्रवक्ता नन्द गुरुङले बताए। ‘केही समय नेपाल पठाउन सकिन्छ कि भनेर हेरियो तर प’रिस्थिति अनुकूल नहुने देखिए पछि सोमबार सिड्नीमा अ’न्त्येष्टि गरिन लागेको हो’ प्रवक्ता गुरुङले भने। को;रोनाको कहर र कमजोर राज्य व्यवस्थाका कारण स्वदेशमा रहेका बाबु आमाले मृ’तक छोराको अनुहार हेर्न र अ’न्तिम सं’स्कार गर्न समेत पाएनन्।
त्यस्तै, ललितपुर इमाडोल घर भएका अमित कार्कीको श;वलाई नेपाल लैजाने आशमा श;वगृहमै राखिएको छ। सिड्नीस्थित हर्षभिलको पबमा दुई विद्यार्थी समूहबीचको वि’वादले झ’डपको रूप लिएपछि अमितको मृ;त्यु भएको थियो। २३ वर्षीय उनको मृ’त्युपछि परिवार पी’डामा छट्पटाएको छ। छोराको मृ’त्युको खबर सुन्नेबित्तिकै आमा बेहोस् भएकी थिइन्। अकल्पनीय पी’डाबीच अमितको अन्तिम पटक अनुहार हेर्ने परिवारको आश छ।
उनको श;व नेपाल लैजान च्यारिटी मार्फत् केही रकम संकलन भैसकेको छ । तर लकडाउन अन्त्य नभई श;व नेपाल पठाउन सकिने अवस्था छैन । ‘परिवारको चाहना अनुरूप अमितको श;व नेपाल पठाउने प्रयास जारी छ, प्रहरीको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन’ सहयोग अभियानकी अभियन्ता भारती पौडेल तिवारीले भनिन् ‘हामी परिवारको सम्पर्कमा छौं र अमितको बाबुआमाको चाहना अनुरूप केही दिन कुर्नेछौं।’
उनले ‘गो फन्ड’मा उठेको रकमबाट खर्च कटाएर बचेको पैसा समेत अमितको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइन्। नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख द्रुपदा सापकोटा यस्ता खाले कयैन् समस्याहरूलाई रोगको महामारी र लकडाउनका कारण तत्काल उद्दार गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्छिन्। ‘मानवीय संवेदनाका यस्ता कयैन् विषय यतिबेला को;रोनाको म’हामारीका कारण असामान्य बन्न पुगेका छन्। केही सहज वातावरण बनेपछि यसका लागि पहल गर्नेछौं’ उनले भनिन्।